Abaalmarinta Xiddiga Africa Oo Ay Iskugu Soo Hadheen 34 Musharax Iyo Salah, Mahrez & Mane Oo Hogaaminaya. | Berberatoday.com
Xidhiidhka kubadda cagta qaaradda Africa ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan CAF ayaa shaaca ka qaaday musharaxiinta ku tartami doona abaalmarinta xiddiga qaaradda Africa ee sanadkan oo ay iskugu soo hadheen 34 ciyaaryahan.
Mohamed Salah oo abaalmarintan difaacanaya ayaa kasoo muuqday musharaxiinta waana kan ugu cad-cad ee abaalmarintaan ku guuleysan kara, sidoo kale Alex Iwobi oo ka mid ah ciyaartoyda ugu saameynta badan Nigeria ayaa ku jira liiska.
Wiilkii iska diiday inuu u ciyaaro xulka Holland kana tirsan haatan Ajax iyo qaranka Morocco Hakim Ziyech ayaa kasoo muuqday liiskaan, walow aan loo badin doonin inuu soo gaari doona masraxa ugu dambeeya.
Abaalmarintaan waxaa la bixin doonaa 8-da January markaas oo la isugu imaan doono magaalada Dakar ee wadanka Senegal.
Yaa Go’aaminaya Guuleystaha Abaalmarintaan?
Waxaa go’aaminaya guddiga farsamada iyo hormarinta CAF.
Khabiiro dhanka saxaafadda ah, halyeeyada Africa, tababarayaasha kooxaha soo gaaray quarter final-ka koobka kooxaha qaramada Africa iyo sidoo kale tartanka Confederation Cup.
Tababarayaasha iyo kabtanada xulalka qaranka 54-wadan ee ku mideysan ururka CAF.
DIyaariye Maxamed Cali Sheekh Cumar.